प्रचण्ड भन्छन्, ‘समाजवाद र साम्यवादको यात्रा लामो हुन्छ’ - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्ड भन्छन्, ‘समाजवाद र साम्यवादको यात्रा लामो हुन्छ’
चितवन, माघ २४ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल अहिले समाजवाद र साम्यवादको लामो यात्रामा रहेको बताएका छन् । भुवानीप्रसाद पौडेलको छैटौँ दिनको श्रद्धाञ्जलि सभामा उनले युगौँयुग लामो यात्रामा रहेकाहरु कदम कदम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हो । हाम्रो बाटो समाजवादको हो भन्ने संविधानमा नै व्यवस्था छ ।’ उनले कम्युनिष्ट बाहेक अरूले बनाएका संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा नराख्ने भन्दै आफूहरुले लोकतन्त्रवादीसँग मिलेर बनाएको संविधानमा ती कुरा समावेश गरिएको बताए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नपाउनेलाई पढाउने, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने र उपचार नपाउनेलाई उपचार दिने काम राज्यको भएको उनले बताए । पुरानो संस्कारलाई वैज्ञानिक, वस्तुवादी र प्रगतिशील दृष्टिकोणले विस्थापित गर्दै जानुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । उनले स्व. पौडेलले पार्टीलाई पुर्याएको योगदानको चर्चा गरे ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डको पहलमा चितवनमा ४ अर्बका योजना, के–के हुँदैछन् विकास निर्माणका काम ?
प्रचण्डले भने, ‘आफ्नो राजनीतिक यात्रामा माडीमा बस्ने घर पौडेलको रहेको थियो ।’ उनले विसं २०३६ को आन्दोलनपछिका समयमा पौडेलले पार्टी पङ्क्तिमा रहेर खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताए ।
सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष नारायण दाहाल, नेत्रप्रसाद पाठक, प्रेम रिमाल, स्व. पौडेलका जेठा छोरा सन्देश पौडेल लगायतले स्व पौडेलका बारेमा बोलेका थिए । विसं २००५ मङ्सिर २७ गते स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेलको यही माघ १९ गते मृत्यु भएको थियो । पौडेल जिल्लाका अग्रणी कम्युनिष्ट नेता थिए ।